Home > Uncategorized > Customer Information Management
MyanmarHims April 30, 2020 Uncategorized
Business တိုင်းမှာ Customer Information များ ထိန်းသိမ်းရန် ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလည်း ဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးချက်လေးကို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် နဲ့ စတင်ပါရစေ။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ EDO ခေတ်ကာလဟာဆိုရင် ကုန်သွယ်မှုစီးပွားရေး အရမ်းကို ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ကုန်သွယ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားကုန်သွယ်မှုတွေပါ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးတွေနဲ့ စည်ကားနေတဲ့ မြို့လည်ကောင်မှာ မီးလောင်မှုကြီး တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာအနီးဆုံးမှာ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ ဆိုင် နဲ့ ကုန်လှောင်ရုံကြီး တစ်ခု ရှိပါတယ်။ လူအများဟာ မီးကိုငြိမ်းသတ်ဖို့ ကြိုးစားကြသလို အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို မီးလွှတ်ရာကြိုးစား ရွှေ့ပြောင်းကြနဲ့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေကြချိန် ကုန်သည်ကြီးဟာ မီးစွဲလောင်စပြုနေတဲ့ ဆိုင်ခန်းထဲကို အပြေးအလွှား တိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူအများဟာ ရုတ်တရက် အံအားသင့်ပြီး အန္တရာယ်များလို့ အော်ဟစ် သတိပေးနေချိန် ကုန်သည်ကြီးဟာ အထုပ်လေးတစ်ခု ပိုက်ပြီး မီးထဲက ပြန်တိုးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
လူအများက ကုန်သည်ကြီးသက်စွန့်ဆံဖျား သွားယူလာတဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းကို ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ အံအားသင့်ပြီး ကုန်သည်ကြီးကို နားမလည်နိုင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ငေးကြည့်ကြပါတော့တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကုန်သည်ကြီးသယ်လာတဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းဟာဆိုရင် သူ့ Customer တွေရဲ့ အချက်အလက် မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဒီပုံပြင်လေးဟာဆိုရင် Information Technology ခေတ်ကိုရောက်လာသည့်တိုင် Business Management တိုင်းအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အဆုံးအမ တစ်ခုလိုပါပဲ။
ဘာကြောင့်များ ကုန်သည်ကြီးဟာ Customer တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဒီလောက်တန်ဖိုး ထားရတာပါလည်း တွေးကြည့်ကြပါစို့။
ကုန်သည်ကြီးဟာ ဆိုင်တွေ၊ ဂိုဒေါင်တွေမီးလောင်လို့ ဆုံးရှုံးပြီ ဆိုတော့အသစ်ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ ငွေလိုအပ် ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီငွေကို မီးလောင်တုန်းက ဆိုင်ထဲက ရွှေငွေတွေ သယ်လာရင်ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်သယ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုသာ ရနိုင်မှာပါ။ ဆိုင်တွေ၊ ဂိုဒေါင်တွေပြန်တည်ဆောက်ပြီးရင်တောင် လုပ်ငန်းကိုတစ်ကပြန်စသလိုကြိုးစားရပါတော့မယ်။ အခုတော့ ကုန်သည်ကြီးသယ်လာတဲ့ Customer တွေရဲ့ အချက်အလက်မှတ်တမ်းတွေ Customer တွေစီကရဖို့ရှိတဲ့ ငွေစာရင်းတွေ၊ Customer တွေရဲ့ အမှာစာတွေ အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ ဟာ အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုပြန်လည် ရှင်သန်လည်ပတ်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရတနာတွေ ဆိုတာထင်ရှားသွားပါပြီ။
Business တိုင်း Customer အသစ်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကြာချိန်၊ စိုက်ထုတ်ရတဲ့ အင်အားတွေ ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ ရှိပြီးသား ကိုယ့်ရဲ့ Customer အရင်းခေါက်ခေါက်များကို Sales လုပ်ရတဲ့ ကြာချိန်၊ အင်အား ကုန်ကျစရိတ်တွေ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဖြေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ Customer အရင်းတွေရဲ့ အကြိုက်၊ သဘောသဘာဝတွေကို သေချာမှတ်သားပြီး service ပေးမယ် ဆိုရင်ဖြင့် Customer တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ အတူ မိမိBusiness ရဲ့ Virtuous Cycle (ဂုဏ်ရှိန်ထင်ရှားကျော်ဇောခြင်းစက်ဝန်း) အသက်ဝင်လာ ပါလိမ့်မယ်။ Virtuous Cycle အသက်ဝင်လာတာနဲ့အမျှ Business တွေအတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ LCV (Lifetime Customer Value) ကို မြှင့်တင်သွားမယ်ဆိုလျှင် Sales & Marketing Cost တွေကို Business Growth (လုပ်ငန်းကြီးထွားတိုးတက်မှု)အတွက် ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီတော့ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ထဲမှာ ဘယ်လောက်တောင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အဖိုးတန်ရတနာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြလည်းဆိုတာသတိထားမိကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ဒီအဖိုးတန်ရတနာတွေကို စနစ်တကျဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ? ဘယ်လိုစနစ်တကျ အသုံးချကြမလဲ? ဆိုတာ နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေး ကြပါစို့။
IT Certification Road Map